Google Maps enyela anyị ohere ịchọta ebe ị na-adọba ụgbọala na Spain n'ụzọ dị mfe | Akụkọ akụrụngwa
Nke nta nke nta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmalite ya, Google emeela ngwa Google Maps ka ọ bụrụ ihe nwere ngwa na ngwaọrụ anyị niile. Ọ bụghị naanị na ọ na-enye anyị ohere ịchọ ebe ntụrụndụ, ụlọ oriri na ọ transportụ restaurantsụ, usoro ụgbọ njem ọha na eze ... mana mgbe emelitere ikpeazụ ọ bụkwa na-enye anyị ohere ịchọta ebe a na-adọba ụgbọala n'ụzọ dị mfe.
Ebe a na-adọba ụgbọala, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị bi n’obodo ukwu, mas bụ otu n'ime nsogbu ndị na-eme ka anyị jụọ onwe anyị karịa oge ọ bụla, ọ bụrụ na anyị na-eji ụgbọ njem ọha ma ọ bụ họrọ iji ụgbọ ala anyị. Na ụlọ ahịa ngwa dị iche iche, anyị nwere ike ịchọta ụfọdụ ngwa na-enyere anyị aka n'ọrụ a na-agwụ ike, mana ekele Google Maps n'oge na-adịghị anya anyị ga-akwụsị iji ha.
Ọrụ a, nke na-adịghị adị na Spen ugbu a, abanyela n'obodo anyị site na ịgbakwunye obodo 5 Spanish: Alicante, Barcelona, ​​Madrid, Malaga na Valencia. A na-arụ ọrụ nke ọrụ a mgbe anyị guzobere ebe anyị chọrọ ịga. Ozugbo e guzobere ya, ọ ga-agwa anyị gbasara nsogbu ma ọ bụ ịdị nfe nke anyị ga-ahụ iji nwee ike ịkwụsị ụgbọala anyị.
N'adịghị ka ngwa ndị ọzọ, nke na-eji ọtụtụ ndị ọrụ egosi ebe ndị anyị nwere ike ịpasa ụgbọ, Google kwuru na ọ dabere na data akụkọ ihe mere eme iji nye ozi a, ihe omuma nke di na obodo ufodu, ga amuta ihe iji nwayo nke oma ihe omuma nke enye ayi. O doro anya na ka anyị mma, ọ dịghị onye ga-ama oge anyị ga-adọba nso ụlọ anyị, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị bi n'etiti obodo, mana enwere ekele maka ụmụ okorobịa Google na-eme ihe niile iji nyere anyị aka n'ọrụ a na-agwụ ike nke ịchọ Ebe a na-adọba ụgbọala, ọkachasị mgbe anyị na-aga mpaghara nke obodo ahụ anyị anaghị eleta anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Google Maps enyela anyị ohere ịchọta ebe ị na-adọba ụgbọala na Spain n'ụzọ dị mfe